ဟုန်ရှင်းအအေးခန်း စက်ရုံအလုပ်သမားများ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒထုတ်ေ
ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ဟုန်ရှင်းအအေးခန်း စက်ရုံ ပိတ်သိမ်းမှုကြောင့် အလုပ်သမား ၂၀၀ ခန့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြ၍ စက်ရုံတွင်ပြန်ပြီး အလုပ်ဆင်းရန်အတွက် အလုပ်သမား ၁၀၀ ခန့်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြသည်။ (ဓါတ်ပုံ - ဟောင်ဆာ)
ဟုန်ရှင်းအအေးခန်းစက်ရုံမှ အလုပ်သမားများ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့တွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအား ယနေ့ညနေ ၄နာရီတွင် နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှု ရရှိ၍ ယင်းသပိတ်စခန်းကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
"အခုအလုပ်သမားတွေကို အလုပ်မရသေးတဲ့ ၃လ ၊ ၅လ ကို နစ်နာကြေးအနေနဲ့ပေးဖို့ရှိတယ်။ သူတို့အလုပ်ရဖို့ကို စက်မှုဇုန်က လုပ်ငန်းရှင်တွေကို လည်း ဒီအလုပ်သမားတွေကို ဦးစားပေးပြီး အလုပ်သမားလိုရင်ခန့်ပေးပါလို့ ပြောဆိုထားတယ်"ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းကပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အလုပ်ရှင်ကိုယ် စားလှယ်များ ယင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါက သပိတ်စခန်းကို ပိတ်သိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းသပိတ်စခန်းကို စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး ယနေ့နေ့လည် တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးမင်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းတို့က ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
မြို့တော်စည်ပင်ကား တံတားကျိုးပြီးပြုတ်ကျ၊ချိန်းတွေ့ သည့်စုံတွဲများအိမ်ပြန်ရန် အခက်ကြုံ
ညောင်ဦးကမ်းပါးပြိုတာနဲ့ စမ္မာနဂိုကနွားကြီးပေါင်ကြိုးတာဘာဆိုင်သလဲ ဆိုတာလိုပါပဲ။
စည်ပင်ကားမောင်းလို့ တံတားကြိုးတာနဲ့ ပန်းခြံထဲကစုံတွဲတွေ အိမ်ပြန်ခက်တာကတော့ ဖြင့် တောင်ငူမှာ ဒီနေ့ မနက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလေးဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
တောင်ငူမြို့၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်း၊ ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်းသို့ဝင်သည့် တံတားပေါ်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၁၁း၁၅ နာရီခန့်က ပန်းခြံအတွင်းပန်းအိုးများ သယ်ဆောင်စဉ်ပြန်အထွက်တွင် ယခင်စည်သာ ယာရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ဆောက်ခဲ့သော တံတားကျိုးကာပြုတ်ကျခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ ကတော့ ကိုအောင်ကျော်စိုး (၃၁)နှစ်၊ (ဘ)ဦးတင်မွှေး၊ ယာဉ်မောင်း(၅) တောင်ငူမြို့နယ် စည်ပင်သာ ယာရေးဦးစီးဌာကလို့သိရပါတယ်။
သည်ကြားထဲမှာ အခက်ကြုံနေရသည်က ပန်းခြံအတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့ စုံတွဲလေးများမှာတော့ လူကတော့ သစ်သားတုံးပေါ်မှ ကျော်ခွပြီး အပြင်ပြန်ထွက်နိုင်ပေမယ့် ပန်းခြံတွင်းရောက်နေတဲ့ ဆိုင်ကယ်အပြင် ထုတ်မရသည့် ပြဿနာကြုံနေရတယ်။
Posted From တောင်ငူသတင်းပုံရိပ်များ
မိချောင်းကန်အပိုင်း၁၊၂၊၃ မှ ပြည်သူများ ၇ ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်
တပ်မြေအဖြစ် မတရားသိမ်းဆည်းထားသည်ဟု ဆိုကာ မိချောင်းကန် အပိုင်း ၁၊၂၊၃ မှ ပြည်သူများ ယနေ့နေ့လည် ၂နာရီတွင် လူဦးရေ ၂၀၀ ခန့် ကမဟာဗန္ဓုပန်းခြံရှေ့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ၇ ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ နံနက်တွင်လည်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာ ယနေ့တွင် နှစ်ကြိမ်မြောက်ခန့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်နိုင် ၊ အောင်နိုင်စိုး ( ကစ္ဆပ )
ယောက်ျားဖြစ်သူ ဘောလုံးပွဲကြည့်သည် ကိစ္စဖြင့် စကားများကြပြီး ဇနီးဖြစ်သူက မိမိကိုယ်ကို ဆွဲကြိုးချ သတ်သေခဲ့မှု တစ်ခု စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က လှည်းကူးမြို့နယ် အတွင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်း ရရှိသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်မှာ လှည်းကူးမြို့နယ် စစ်ပင်ရွာရှိ လယ်တဲတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူမှာ အသက်(၂၁) နှစ်အရွယ် မ ----- ဆိုသူ လယ်စားရင်းငှား တစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြု ထားသည်။
၎င်းသည် နေအိမ်တဲအတွင်း အမြင့်(၉) ပေခန့်ရှိ ခေါင်မိုးဝါးတန်းတွင် အရှည်(၁၈) ပေ၊ လက်သန်းလုံးခန့် အစိမ်းရောင် နွားချည်သည့် ပလစ်စတစ် ကြိုးဖြင့် ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးနေသည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။
ယင်းသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပက်ဝန်းကျင်ကို စစ်ဆေးရာတွင်လည်း ၎င်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ဘောလုံးပွဲကြည့်သည့် ကိစ္စဖြင့် ရန်ဖြစ် စကားများခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။
ထို့နောက် ခင်းပွန်းဖြစ်သူမှာ ညနေ ၃ နာရီ အချိန်တွင် ဘောလုံးပွဲကြည့်ရန်
ရွာထဲသို့ ထွက်သွားပြီး ည ၈ နာရီခွဲ အချိန် နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်စဉ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူအား ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးနေလျက် တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆို ထားသည်။
သေဆုံးသူ၏ တဲအတွင်းတွင်လည်း “အစ်ကိုကြီး သက်ကို မချစ်တော့ဘူး” ဟု ရေးသားထားသော စာရွက်ပိုင်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ရဲဌာနက ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ကြောင့် အလောင်းအား လှည်းကူးဆေးရုံသို့ ပို့အပ်ရာ ပီအာရ် ၆၈ ဖြင့် လက်ခံထားရှိပြီး ဓမ္မတာတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်မ ဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်ရန် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဒါးပိန်နယ်မြေရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးဖြစ်သူ ရဲအုပ်မင်းဦးက သေမှုသေခင်းရေးဖွင့်ထားသည်။
အဆိုပါအမှုကို ရဲစခန်းသေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၈/၂၀၁၃ဖြင့် ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
ယင်းနေ့တွင်ပင် နေရပ်လိပ်စာ အတည်တကျမရှိသူ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့မှုတစ်ခု သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်လည်း သေမှုသေခင်းပေါင်း လေးမှုအထိ ဖြစ်ပွားထားသည်ကို တိုင်းရဲဌာန၏ မှုခင်းမှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။
ယင်းသေမှုသေခင်း လေးမှုမှာ အရက်သေစာ သောက်စားထားပြီး အားအင်ချိနဲ့ သေဆုံးမှုသုံးမှုနှင့် ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှု တစ်ခုတို့ ဖြစ်သည်။
Star Model Int’L နှင့်ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ကို ခင်ဝင့်ဝါက ငွေကျပ်သိန်း ၃၀ ပေးဆောင်၍ ရုပ်သိမ်း
Miss Supranational ပြိုင်ပွဲတွင် ဆု လေးဆုဆွတ်ခူးခဲ့သည့် ခင်ဝင့်ဝါသည် Star model Int’l နှင့် ချုပ်ဆိုထားသည့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်အချို့ကို
ဖောက်ဖျက်ခဲ့သဖြင့် ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ လျော်ကြေး ပေးအပ်၍ ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ခင်ဝင့်ဝါက မဇ္ဈိမသို့ပြောကြားလိုက်သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ခင်ဝင့်ဝါအနေဖြင့် Miss Supranational Myanmar Organization ဖြင့် ချုပ်ဆိုထားသည့်အတိုင်း တစ်နှစ်တာ လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်သည်။
“သမီး Star မော်ဒယ်လ်နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အတွက် လျော်ကြေးငွေကို ဒီလလယ်မှာ Miss Supranational Myanmar Organization က ပြုလုပ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဆက်ပြီး အလုပ်တွေ လုပ်သွားမှာပါ၊ ဆရာဂျွန်လွင်နဲ့ ဘာမှတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး၊ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ”ဟု ခင်ဝင့်ဝါက ပြောသည်။
ခင်ဝင့်ဝါသည် Star Model int’l တွင် ၂၀၁၂ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လတွင် စတင်ပြီး သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် ခင်ဝင့်ဝါက ၎င်းအေဂျင်စီနှင့် ငါးနှစ်တာ အနုပညာအလုပ်များကို အတူတကွ လုပ်ကိုင်မည့် စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ စာချုပ်အား ပယ်ဖျက်ခြင်းအပေါ် Star Model int’l မှ ဂျွန်လွင်က ““အခု အချိန်မှာ မပြေလည်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ သူလည်း သူ့အလုပ် သူလုပ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အေဂျင်စီအနေနဲ့ ကလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်၊ စာချုပ်ချုပ်ထားပေမယ့်လည်း သူတို့တွေ အလုပ်လုပ်ခွင့် ရနေမှာပါ။ ပြည်ပကို သွားပြိုင်ကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ organizer တွေက အကျိုးမြတ်လိုလို့ လွှတ်ပေးတာလား။ စေတနာနဲ့ လွှတ်ပေးတာလား ဆိုတာကို သိရမှာပါ။ စာချုပ်ဆိုတာက စည်းနဲ့ဘောင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် လုပ်ထားတာပါ။ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စာချုပ်အတိုင်း တကယ်ပေးလျော်ရမယ်ဆိုရင် ဟိုဘက်ကို သိန်းတစ်ထောင်လျော်ရမှာ ကိုယ့်ဘက်က သိန်း ၃၀ ပဲ လျော်ရမှာဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကို
လျော်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူ့အနေနဲ့ ဟိုဘက်ကို စာချုပ်ချုပ်ထားတော့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ငါးနှစ် စာချုပ် ချုပ်ထားပေမယ့် သိန်းကျပ် ၃၀ သတ်မှတ်ပြီး စာချုပ်ကို ဖျက်ပေးခဲ့တာပါ”ဟု ပြောသည်။
ဒီအတွက် ဆုချဖို့ ကြေညာထားတဲ့ ဟက်ကာအဖွဲ့အစည်းများ ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေပါပြီ။ တကယ်မှန်တယ်ဆိုရင် ဆုကြေးငွေ အတော်လေးရမယ့် ဖောက်ထွင်းမှုကြီးပါ။ Apple ရဲ့  iPhone 5S ကို ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Hack လုပ်နိုင်ကြောင်း Claim လုပ်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ Individual တွေ များနေပါပြီ။ Apple က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ပြောဆိုမယ် ဆိုတာကိုလည်း စောင့်ဆိုင်းနားစွင့်လျက် ရှိကြကြောင်း သိရပါတယ်။
အခြား Iphone သတင်းများ >> iphone သတင်း
အသက် ၁၂ နှစ် နဲ. ၂၄ နှစ် အကြား လူငယ် အများစု ကြုံတွေ.နေရတဲ့ အလှဖျတ် တဲ့
၀က်ခြံဟာ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း ၊ ရင်ဘတ် ဒါမှမဟုတ် ကျောကုန်းတွေပေါ်မှာ
၁။ အဆီအစိမ့်အစာများ (မြေပဲ၊ ချောကလတ်…..)
၄။ အစားအသောက်အချိန် မမှန်ခြင်း
၇။ သစ်သီးယိုစုံ၊ ချိုချဉ်၊ ရေခဲမုန့် များ စားခြင်း
၀က်ခြံ ပေါက်သော သူများအနေဲ့ အသား စားတာထက် အသီးအရွက် များ ကို
အလေးပေးစားသင့်ပါတယ်။ တရက် ကို ထမင်းသုံး နှပ် မှန်မှန်စားပြီး အရည်ရွမ်းသော အသီးများများ စားပေးရပါမယ်။
အသင့်စား သစ်သီးဖျော်ရည် ဗူး များ ကို ရှောင်ပါ။
တပတ်လောက် မှန်မှန်စားပေးလိုက်ရင် ၀က်ခြံ တွေ သိသိသာသာ လျှော့ပါးလာမှာပါ။
၀က်ခြံထွက်လာရင် လဲ မမှည့်ခင်လက်နဲ့လျှောက်ဆိတ်တာ တို့ ညှစ်တာတို့ မလုပ်ရပါဘူး။
၀က်ခြံ တခု ဆိုတာ အသားထဲမှာ အမြစ်တယ်နေတဲ့ အဖြူရောင် အမြစ် (gland) ကလေး
ရှိပါတယ်။ ၀က်ခြံမမှည်.ခင်မှာ ထိုအမြစ် ကို လက်နဲ့ညှစ်ထုတ်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပြီး
အကယ်၍ လက်နဲ. ဆိတ်တာ ညှစ်တာလုပ်ရင် ၀က်ခြံ အမြစ်က အထဲ မှာ ပုပ် ပြီး ၀က်ခြံ
အထက်မှ အေ၇ပြား တွေရောင် ပြီး တော်ရုံနဲ့ မမှည့်တော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပြည်တည်ပြီး
မှည့်လာလို့ ညှစ်ပြီးသွားရင် အချိုင့်အခွက်အနာရွက် ကျန်ခဲ့ပြီး အင်မတန်မှ
အကျည်းတန်စေပါတယ်။ အမာရွက်ပျောက်ဆေးတွေရှိပေမယ့် မထိရောက် နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ၀က်ခြံပေါက်တဲ့ အချိန်မှာ အိမ်တွင်းဖြစ် ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသနိုင်တဲ့
နည်းလမ်းတွေ ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လိမ္မော်သီး အခွံ ကို ရေ အနည်းငယ်ရော၍ ထောင်းပါ။ ထွက်လာသော အရည် ဖြင့် ၀က်ခြံ
ကြက်သွန်ဖြူ ကိုထပ်ခြမ်းခွဲ ၍ ၀က်ခြံ ပေါ်ကို ခဏခဏပွတ်ပေးပါ။ ဒါ့အပြင် ကြက်သွန်ဖြူ ကို
တရက် ၃ဥလောက် ၁လလောက် မှန်မှန်စားကြည့်ပါ။
နံနံပင် ထောင်းလို့ရတဲ့ အရည် လက်ဖက်ရည် တဇွန်းနဲ့ နနွင်း အနည်းငယ်ရောပြီးတော့လဲ
၀က်ခြံ ပေါ် လူးနိုင်ပါတယ်။
၀က်ခြံပေါက်သော မျက်နှာ၊ လည်ပင်း၊ ကျောကုန်း ပေါ် သခွားသီး စိတ် နဲ. ၁၅ မိနစ်လောက်
နိုင်ရိုဘီက ကုန်တိုက်ကို စစ်သွေးကြွတွေ ဆက်လက် ထိန်းထားဆဲ
အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်စီးထားတဲ့ ကင်ညာနိုင်ငံ နိုင်ရိုဘီမြိုက Westgate ကုန်တိုက် ကနေ မီးခိုးလုံး အမဲကြီးတွေ ထွက်လာ နေတာ ကို တွေ့နေရပါတယ်။
စစ်သွေးကြွတွေဟာ ကုန်တိုက် ထဲကို စနေနေ့က ဝင်စီးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ လူ အတော်များများကိုလည်း ဓားစာခံတွေ အဖြစ် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ် ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေနတ်သံတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် ကြားနေရပြီး၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကုန်တိုက်ဆီ ကို ပြေးလွှားသွားနေကြပါတယ်။
ကင်ညာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဂျိုးဇက် အော်လေ လန်ကူ က အဆောက် အဦးထဲက ဓားစာခံ အကုန်နီးပါးကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ဓားစာခံ အနည်းငယ်သာ အထဲမှာ ကျန်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
စစ်သွေးကြွ ၂ ဦးကိုလည်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီလို့ သူက ပြောပါတယ်။
ကင်ညာ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့က အနည်းဆုံး လူ ၆၉ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပြီ လို့ အစောပိုင်းတုန်း က ပြောပေမယ့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ကတော့ စုစုပေါင်း ၆၂ ဦးသာ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်တချို့မှာ iphone 5c နဲ့ 5s ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ စတင်ဝယ်ယူနိုင်တော့ည်
ရန်ကုန်မြို့ကဆိုင်တချို့မှာ iphone 5c နဲ့ 5s ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ စတင်ဝယ်ယူနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်နေရီရီက ပေးပို့ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး-ကိုခန့်၊ ဖိုးကျော်
၂၃.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၃၃၀ အချိန်တာမွေမြို့မရဲစခန်းမှ
သတင်းအရ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ သမိန်ပရမ်းလမ်း ပလက်ဖေါင်းပေါ်ရှိ မြင့်လှိုင်၊ တာမွေကြီး(က/ဂ)ရပ်ကွက်နေသူ၏
ဆေးဆိုင်အား ရှာဖွေရာ သစ်သားခေါက်ဗန်းအတွင်း ကာမစိတ်ကြွ
ဟော်မုန်း ဆေးများဖြစ်သည့် GOOD MAN ၊ ANPHAMALEPLUS ၊
MAX MAN ၊ VIAGRA ၊ MIRBEAN ၊ PIOTIN ၊ GREEN MAGRA ၊
MASTIGRA ၊PLANT VIGRA ၊ KING BOSS တံဆိပ်များပါဆေဗူးများ၊
DR-X-100 ၊ MCC ၊ CAVERTA တံဆိပ်များပါဆေးကဒ်များ၊
STRONG POWER ၊ BGNTLEY ၊ BLACK DIAMOND တံဆိပ်များပါ
ဆေးထုပ်များ၊ BLACKANT တံဆိပ်ပါဆေးတောင့်များနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ
ရောင်းချရရှိသည့်ငွေကျပ် (၉၀၀၀)တို့အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိသဖြင့် တာမွေမြို့မရဲစခန်း(ပ)၄၁၄/၂၀၁၃၊အမျိုးသားဆေးဝါးပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်
ဒါကြောင့် သူ၏ ဗီဒီယိုဟာ ရုပ်မြင်သံကြားတွင် သာမက အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း စေသာ နေရာများကိုပါ ပျံ့နှံ့သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကံဆိုးတာက သူဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် မကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့တာပါ။
သူ၏ သေတမ်းစာမှာ အခုလို ရေးသာထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ " ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ကတည်းက နာမည် ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အခု ကျွန်တော် ဗီဒီယိုမှာ သေချာစွာ သရုပ်ဆောင် မပြသ နိုင်ခဲ့တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ " လို့ ဆိုပါတယ်။
REF:Kachin Daily News
ဆံပင်ဆေးဆိုး လိုသူတို့ အတွက် ဆံကေသာ ပညာရှင်တို့ ၏ အကြံပြုချက်များ
သန္ဓေတားဆေး မှီဝဲခြင်း ကြောင့် အမြင်အာရုံ ထိခိုက်သွားသည့် အလှမယ်
ဘောင်းဘီတို ၀တ်ဆင်ခြင်း မှာ သရုပ်ပျက်လွန်းကြောင်း သမီးကို ဆုံးမလိုသဖြင့် ဖခင်က ညစာစားပွဲသို့ အမျိုးသမီး ၀တ်ဘောင်ဘီတိုဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့
အိမ်ခြံမြေ အနိမ့်ဆုံး ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်တွေကို အစိုးရက ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်မှာ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ရာမှာ အနိမ့်ဆုံး ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်တွေကို အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလို သတ်မှတ်တာဟာ ဈေးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မဟုတ်ပဲ အစိုးရ အနေနဲ့ အခွန် ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ဖို့ အပြင် အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွတ်ကို ဈေးမကစား နိုင်အောင်လို့ လုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦး မောင်မောင်သိမ်း ပြောပါတယ်။
အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ၆ဖွဲ့ ပါတဲ့ ကာလတန်ဖိုး စီစစ် သတ်မှတ်ရေး အဖွဲ့က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြို့ ၃၃မြို့နယ်မှာ လာမဲ့ အောက်တိုဘာလ တစ်ရက်နေ့က စပြီး ဒီစနစ်နဲ့ စမ်းသပ် ကောက်ခံ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ နှုန်းထားတွေဟာ လက်ရှိ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းဝယ် ဈေးကွတ် ပေါက်ဈေးကို အခြေခံပြီး သတ်မှတ်ထားတာ ဆိုပေမဲ့ လက်ရှိ ဈေးကွက် အတွင်းမှာ အရောင်းဝယ် ဖြစ်နေတဲ့ ပေါက်ဈေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ ၄ ပုံ ပုံ ရင် တစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဒီလိုစနစ်နဲ့ ကောက်ခံဖို့ သတ်မှတ်ရတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်သိမ်း က ဘီဘီစီ ကို ပြောပြရာမှာ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းမှာ စလုပ်တာ ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ် လုပ်ဆောင်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ အခွန်အပြည့်အဝ ရဖို့ လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပြီး ဈေးသတ်မှတ်တာ မဟုတ်ကြောင်း ၊ အခွန် မဆုံးရှုံးရအောင် ဦးတည်လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အခွန်က ဒီအတိုင်းသွားရင် ဈေးကစားလို့ မရအောင် လုပ်တာလို့ ဒု ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်သိမ်းက ပြောပါတယ်။
အခုလို အစိုးရ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ဈေးနှုန်းတွေ ထဲမှာ ဈေးအကြီးဆုံး ကတော့ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်နဲ့ ဗဟန်းမြို့နယ်တို့ ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ပေပတ်လည်ကို ကျပ် ၃သိန်းကျော် လောက်အထိကို သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ရန်ကုန် က အိမ်ခြံမြေ အရောင်းဝယ် လုပ်တဲ့ သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီလို သတ်မှတ်ပြီး ကောက်မယ်လို့ အစိုးရက ပြောပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းဝယ် အခြေနေကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလဲလို့ စိုင်းခွန်နောင် အိမ်ခြံမြေ အရောင်းဝယ် လုပ်ငန်းက အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးရန်အောင် ကို မေးကြည့်တဲ့ အခါ ဈေးပြောင်း မသွားနိုင်ပါဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
တကယ် မဝယ်မဖြစ်တဲ့ သူတွေကတော့ ဝယ်ယူ နေထိုင်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးရန်အောင်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အချက်အချာ ကျတဲ့ နေရာတွေကတော့ အရောင်းအဝယ် ဈေးကျမသွားနိုင်ဘဲ အရောင်းအဝယ်က အရင်အတိုင်း ဆက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြို့သစ်တွေမှာ အကွက်သစ်တွေကို ဝယ်ရောင်းလုပ်သူတွေတော့ ဈေးကစားနိုင်မှာ မဟုတ်တော့တဲ့ အကြောင်း သူက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို မြေတွေ ၊ ခြံတွေ ၊ အိမ်တွေကို ဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်း ဈေးကစားတာဟာ ၂၀၀၇ တုန်းက အစိုးရက အခွန်နှုန်းထား တွေကို လျှော့ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး သိသာ လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ အိမ်ခြံမြေ မြေဈေးတွေ မြင့်လာတာ ဖြစ်ပြီး အခု စနစ်ဟာ အရင် စနစ်နဲ့ ကွာတာက ပြည်ထဲရေး ၊ ပြည်တွင်းအခွန် ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲက အိုးအိမ် စတဲ့ ဌာနတွေ ပါဝင်ပြီးတော့ လိုအပ်သလို ဈေးနှုန်းတွေကို ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ဖို့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အတွက် အများကြီး လက်တွေ့ကျတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခွန်ကို ဝယ်သူက ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ရောင်းသူ ဖက်က ၇ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ဖို့ သတ်မှတ်ချက်ဟာ အိမ် ခြံ မြေ အမည်ပေါက် ပြောင်းမှဘဲ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာ စပယ်ရှယ် ပါဝါတွေ နဲ့ အမည်မပြောင်းဘဲ တွေ့ရောင်း ၊ တွေ့ဝယ် နေတဲ့ တကယ့် ဈေးကွတ်မှာ အချိန်တို အတွင်း ဈေးတွေ ကျလာနိုင်တဲ့ အထိ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သုံးသပ် နေကြပါတယ်။
Miss Supranational 2013 ဆုရှင် ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ် Mutya Datul ရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီး၊ ဓာတ်ပုံ- missosology
Mutya ဟာ ငယ်စဉ်က ကျေးလက်တောရွာကမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစု က ပေါက်ဖွားလာတာ ဖြစ်သလို သူ့ဘ၀မှာ ဆင်းရဲမှုကြောင့် ဆာလောင်မှုတွေနဲ့ မကြာခဏ ကြုံဆုံခဲ့ရ တာလေးကိုလည်း မေးမြန်းခန်းတခုမှာ ပြောသွားပါတယ်။
ကားပြပွဲ တွေ မှာ အကုန်ချွတ်တဲ့ မော်ဒယ် တွေ ကို တရုတ် နှိပ် ကွပ်
တရုတ် ပြည်မှာ မော်တော် ကား ပြပွဲ တွေ ကျင်းပ တဲ့ အခါ မလုံ မခြံ ၀တ်ထား တဲ့ မော်ဒယ်(လ) တွေ ကို ဖမ်းဆီး အရေး ယူတာ တို့မော်တော်ပြ ပွဲ ကျင်း ပတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကို လည်း အရေးယူတာ တွေ လုပ် လာ ပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ဒီနေ့ ထုတ် ဝေတဲ့ South China Morning Post သတင်း စာ မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ လဆန်း က ချန်ဒူး မော်တော် ကား ပြ ပွဲ မှာ မစ်ယန်ယူ ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်(လ) အပါအ၀င် အခြား မော်ဒယ် လေးဦး ဟာ ၀တ်လစ် စလစ် နီး ပါး ဖက်ရှင် နဲ့ပုရိသ တွေ အကြိုက် ဓာတ် ပုံ အရိုက်ခံ ခဲ့ တယ် လို့ဆို ပါတယ်။ ဒီကား ပြပွဲ မှာ ဂျပန် လုပ် မော်တော် ကား တွေ နဲ့တရုတ် ပြည် လုပ် မော်တော် ကား တွေ ပြသထား ပါတယ်။ အစိုးရ က နှိပ် ကွပ် ပေမယ့် လည်း မော်ဒယ်(လ) တွေ ရဲ့အစွမ်း ကြောင့် ကား တွေ အရောင်း စွံ သဗျို့ လို့ချန်ဒူး အော်တို ပြပွဲ ကို စီစဉ် သူ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ Car News China အင်တာနက် စာမျက် နှာ မှာ တော့ ကား ပြ ပွဲ တွေ မှာ မော်ဒယ်(လ) တွေ ၀တ်လစ်စလစ် နီး ပါး အလှ ပြ ခိုင်း တာ မျိုး တွေ့ရင် အရေး ယူအပြစ် ပေးမယ် လို့ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့အိမ် နီး ချင်း နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ တရုတ် နိုင်ငံ မှာ ကား ပြ ပွဲ တွေ ၊ မော်ဒယ်(လ) ရှိုး တွေ မှာမမြင် အပ် တဲ့ နေ ရာ တွေ ကို ဖော်ပြ ပြီး လူကြိုက်များ အောင် လုပ်တာ ခွင့် မပြု တော့ ဘူး လို့ဆို ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ တော့ မော်တော် ကား ပြ ပွဲ တွေ မော်ဒယ် ရှိုး တွေ မှာ ၀တ်လစ်စလစ် နီး ပါး မဖြစ် သေးတာ ကြောင့် သိသာ တဲ့ နှိပ် ကွပ် မှု တွေ မလုပ် သေးဘူး လို့မော်ဒယ်(လ) ပြပွဲ စီစဉ် သူ တစ်ဦး က ပြောပါတယ်။ လတ်တလော ကျင်း ပနေ တဲ့ မော်တော်ကား ပြပွဲ တွေ ၊ မော်ဒယ်(လ) ရှိုး တွေ မှာ စကတ် တို ယဉ်ကျေးမှုခောတ်စား နေပေမယ့် အဖော် အချွတ် လုပ် ပြီး ပြတာ မျိုးတော့ မတွေ့ ရ သေးဘူး လို့ရန်ကုန် မြို့က ဟိုတယ် မန်နေဂျာ တစ်ဦး က ပြောပါတယ်။
မန်ယူကို ၄-၁ ဖြင့် ဂိုးပြတ်သွင်းသွားတဲ့ မန်စီတီး တို့ရဲ့ ဒါဘီပွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၅ ရဲ့ စူပါဆန်းဒေး ပွဲစဉ်အဖြစ် မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းနှင့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဟာ အီတီဟတ် အားကစားကွင်းကြီးမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ဒါဘီပွဲ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်း ချန်ပီယံဆုအတွက် စိန်ခေါ်နေသည့် အသင်း နှစ်သင်းတို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ရှင် မန်စီးတီး အသင်းမှာ ဂိုးသမား ဂျိုးဟတ်၊ နောက်တန်းမှာ ဇာဘလက်တာ၊ ကွန်ပနီ၊ နာစတာဆစ်နှင့် ကိုလာရော့ဗ်တို့ ပွဲထွက်လာပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ နာဗက်၊ တိုရေး၊ ဖာနန်ဒင်ဟိုနှင့် နာစရီတို့ နေရာယူပြီး တိုက်စစ်အတွဲအဖြစ် အဂူရိုနှင့် နီဂရီဒိုတို့ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်လာပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာတော့ ဂိုးသမား ဒီဂီအာ၊ နောက်တန်းမှာ စမောလင်း၊ ဖာဒီနန်၊ ဗီဒစ်နှင့် အီဗရာတို့ ပါဝင်လာပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ ဗလင်စီယာ၊ မိုက်ကယ်ကားရစ်၊ ဖလေနီနှင့် အက်ရ်ှလေယန်းတို့ ပွဲထွက်လာပြီး ဝိန်းရူနီနှင့် ဒန်နီဝဲလ်ဘတ်တို့ ပွဲထွက် လာပါတယ်။ အားထားရသည့် တိုက်စစ်မှူး ဗန်ပါစီ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဒါဏ်ရာ အနည်းငယ် ရရှိသွားတဲ့အတွက် ဒီပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲပေါင်း ၉၀ ဆက်တိုက် ပါဝင်ကစားခဲ့သည့် ဗန်ပါစီအနေနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ လွဲချော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲစကတည်းက နှစ်ဖက်အသင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် စတင် ကစားလာပြီး ပွဲချိန် ၄ မိနစ်မှာ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းခေါင်းဆောင် ဗီဒစ် အပေးမှားတဲ့ ဘောလုံးကို နာဗက် ရသွားပြီး ဧရိယာထိပ်ကနေ လှမ်းကန်ခဲ့ပေမယ့် အပေါ် နည်းနည်း မြင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၅ မိနစ်မှာတော့ စမောလင်းနှင့် နာဆတာဆစ်တို့ ဘောလုံးယှဉ်ခေါင်းတိုက်ကြရာမှာ နာစတာဆစ်က အဝင်ကြမ်းတဲ့အတွက် အဝါကဒ်ပြ သတိပေးခံရပါတယ်။ ပွဲချိန် ၉ မိနစ်မှာတော့ မန်စီးတီး အသင်းက ဂိုးပေါက် ကန်သွင်းဖို့ အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရခဲ့ပြီး အဂူရိုအသာအယာ ထုတ်ပေးတာကို ကိုလာရော့ဗ် ကန်သွင်းရာမှာ ဗီဒစ် ခေါင်းတိုက် ဖျက်ထုတ်လိုက်ရပါတယ်။
ပွဲချိန် ၁၅ မိနစ်အထိ မန်စီးတီး အသင်းက ကွင်းလယ်ကစားကွက် အသာနဲ့ ကစားနေပြီး မန်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ ခံစစ်ကို အားပြု ကစားနေခဲ့ပါတယ်။ ခြေစွမ်း အသာစီးရနေတဲ့ မန်စီးတီးဟာ ၁ မိနစ်မှာပဲ ဦးဆောင်ဂိုး ရယူလိုက်နိုင်ပါတယ်။ နာစရီကနေ နောက်ပေါက် ချပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို နောက်က တက်လာတဲ့ ကိုလာရော့ဗ်က ရယူသွားပြီး ဂိုးရှေ့ကို ဖြတ်တင်ပေးလိုက်ရာမှာ ဂိုးရှေ့မှာ အသင့်ရှိနေတဲ့ အဂူရိုက ပိတ်သွင်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂီအာ လှုပ်ရှားခွင့်တောင် မရလိုက်တဲ့ ဂိုးတစ်ဂိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဂူရိုဟာ မန်ယူနိုက်တက်နှင့် ၅ ပွဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရာမှာ ၃ ဂိုးသွင်းယူလိုက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈ မိနစ်မှာလည်း မန်စီးတီး အသင်းက ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး နာစရီ ဧရိယာထိပ်ကနေ မြေမကျဘော အပြင်း ကန်သွင်းတာ သိပ်ကောင်းခဲ့ပေမယ့် ဂိုးပေါက် အထက်ကို အနည်းငယ် ကျော်လွန်သွားတဲ့အတွက် မန်စီးတီးတို့ ကံခေမှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် ၂၅ မိနစ်အထိ မန်စီးတီးအသင်းက အသာစီး အနေအထားနဲ့ကစားနေခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ ကွင်းလယ်မှာ အပျက်များနေခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှာ ထိထိရောက်ရောက် မခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မန်စီးတီး အသင်းက့ပဲ ခြိမ်းခြောက်နေခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းအရ မန်စီးတီး အသင်းက ဒီထက် ဂိုးပိုရသင့်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
၂၉ မိနစ်မှာတော့ ဝိန်းရူနီ တစ်ယောက် အဝါကဒ်ပြသ သတိပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအဝါကဒ်ဟာ မန်စီးတီးအသင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ပွဲစဉ်များမှာ ရူနီတစ်ယောက် ၈ ကြိမ်မြောက် ပြသခံရတဲ့ အဝါကဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ အားနည်းနေတဲ့ မန်ယူဟာ ဘောလုံးရှေ့သိပ်မရောက်တဲ့အတွက် ရူနီ ဆင်းချိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ရတဲ့အတွက် ရူနီအတွက် အတော်ပင်ပန်းမယ့် ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ အချိတ်အဆက် အလွန် ကောင်းမွန်နေပြီး ပွဲချိန် ၃၅ မိနစ်အထိ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု ၆၅ ရာနှုန်းနဲ့ ဖိအားပေး ကစားနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာမန်စီးတီးအသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားပုံ တစ်ခုပါပဲ။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ မန်ယူနိုက်တက်က ကစားပုံ တက်လာပြီး ကွင်းလယ်မှာ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည် ရယူလာနိုင်ခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်ကစားကွက် ယှဉ်ပြိုင်လာနိုင်သလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်မှု အပိုင်းမှာတော့ ညံ့ဖျင်းနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ ဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်နေခဲ့ပြီး ပထမပိုင်း ပွဲပြီးဖို့ နာကျင်အချိန်ပို ပေးထားတဲ့ တစ်မိနစ်မှာ ဒေါင့်ကန်ဘော ရခဲ့ပြီး ဒေါင့်ကန်ဘောမတင်လိုက်တာကို နီဂရီဒို ခေါင်းတိုက် သွင်းရာမှာ ကြားထဲကတက်လာတဲ့ ယာယာတိုရေးက ဒူးနဲ့ တိုက်ပြီး ပိတ်သွင်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ပထမပိုင်း အပြီးမှာ မန်စီးတီး အသင်းက ၂ ဂိုးအသာနဲ့ ဦးဆောင် ကစားလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း လူစာရင်း အပြောင်းအလဲ မရှိ ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစစချင်းမှာပဲ မထင်မှတ်ပဲ မန်စီးတီး အသင်းက တတိယမြောက် ဦးဆောင်ဂိုး သွင်းယူလိုက်နိုင်ပါတယ်။ မန်ယူနိုက်တက်အသင်းက တက်ဖိ ကစားနေရင်း ပြန်လည် ပေါက်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကနေ တစ်ဆင့် နီဂရီဒို ကနေ အတွင်းဖက်ကို ချိုးပေးလိုက်တာကို အဂူရိုက အနီးကပ် ပိတ်သွင်းပြီး ရယူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်နေတဲ့ နောက်ပိုင်း မန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒန်နီ ဝဲလ်ဘတ်ကို ထုတ်ပြီး ကလဲဗားလေး လူစားဝင် ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ မန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါကစားဖို့ အားသန်နေကြပြီး ကောင်တာ ပေါက်ထွက်လာတဲ့ မန်စီးတီးရဲ့ ထိုးဖောက်ချက်တွေဟာ ဂိုးရလုနီးပါး အနေအထားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၅၄ မိနစ်မှာ နာဗက် မတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးဟာ နီဂရီဒို ပိတ်သွင်းနိုင်လု နီးပါး ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဗီဒစ် ဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်တစ်ဂိုး မပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅၄ မိနစ်မှာတော့ မန်ယူနိုက်တက်အတွက် အကောင်းဆု့း အခါင့်အရေး တစ်ခု ရခဲ့ပြီး ကလဲဗားလေး တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို ရူနီ ပိတ်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဂိုးဘားပေါ် အနည်းငယ် ကျော်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
၅၉ မိနစ်မှာ ဝဲလ်ဘတ် ဖြတ်တင်လိုက်တဲ့ ဘောလုံးဟာ နောက်ခံလူတွေနဲ့ ထိပြီး ဂိုးပေါက်ဆီ သွားခဲ့ပေမယ့် ဂျိုးဟတ် ဖမ်းယူလိုက်နိုင်ပါတယ်။
၆၂ မိနစ်မှာ မန်စီးတီး ဧရိယာထိပ်နားမှာ ဝဲလ်ဘတ်ကို ဖာနန်ဒင်ဟို ဖျက်ထုတ်တာ နည်းနည်း ကြမ်းခဲ့တဲ့အတွက် ပြစ်ဒါဏ်ဘော ကန်သွင်းခဲ့ ရပါတယ်။ ရူနီ ကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် လူကာထားတဲ့ အတန်းကိုပဲ ထိ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၄ ဂိုးရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့ နောက်မှာမှ မန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တိုက်စစ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကစားလာနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက် ခြိမ်းခြောက်မှု အချို့လည်း ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယန်းအစား ကလဲဗားလေး ဝင်ကစားခဲ့တာဟာ အတော်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အနေအထားပါ။ ၆၆ မိနစ်မှာ ရူနီ ပြန်ချိုးပေးလိုက်တာကို ဝဲလ်ဘတ် အဝေးကနေ ကန်သွင်းပေမယ့် ဂိုးပေါက်တည့်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၆၇ မိနစ်မှာတော့ ဘယ်ခြမ်းကနော စမောလင်း ခင်းပေးလိုက်တာကို ဖလေနီက တစ်ချက်တားပြီး အပိုင် ကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဂျိုးဟတ် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပဲ ခံစစ်ပိုင်းမှာသာ ဦးစားပေး ကစားနေတဲ့အတွက် ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အများအပြား ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မန်ယူနိုက်တက်အသင်းက ၅၂ ရာနှုန်းအထိ ပြန်လည် အသာစီး ရလာခဲ့ပါတယ်။
၇၀ မိနစ်မှာ ကစားအား ကျဆင်းလာတဲ့ နာဗက်အစား မီလ်နာ ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ၇၁ မိနစ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ခု ရခဲ့ပြီး နီဂရီဒို ဧရိယာထိပ်ကနေ တစ်ယောက်တည်း အပိုင် ကန်သွင်းခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် ဂိုးပေါက် လွဲချော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၇၅ မိနစ်မှာတော့ မန်စီးတီး အသင်းက တိုက်စစ်မှူး နီဂရီဒိုအစား ဇစ်ကို ဝင်ရောက် ကစားခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ခံစစ်ပိုင်း အင်မတန် လျော့ရဲလာခဲ့ပြီး တိုက်စစ်ကိုပဲ ဖွင့်ကစားဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကောင်တာ ပေါက်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ဇစ်ကိုက တစ်ယောက်တည်း အဝေးကနေ အပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် ဒီဂီအာ ကာကွယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အေးဆေးသက်သာ ကာကွယ်လိုက်နိုင်တာ မဟုတ်ပဲ နှစ်ဆင့်ဖမ်းကာကွယ်လိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၇၉ မိနစ်မှာတော့ မန်ယူနိုက်တက်အတွက် ဂိုးရဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးတစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါင့်ကန်ဘောကို အီဗရာခေါင်းတိုက်သွင်းရာမှာ တိုင်မှန်ပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို မန်ယူနိုက်တက် ကစားသမားတွေ ၂ ကြိမ် ဆက်တိုက် ကန်သွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မန်စီးတီးနောက်ခံလူတွေနဲ့ ထိပြီး ဂိုးအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၈၅ မိနစ်မှာ အဂူရိုအစား ဂါစီယာ ဝင်ရောက် လာပါတယ်။ ၈၆ မိနစ်မှာပဲ ဧရိယာထိပ်မှာ ရတဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ဘောကို ဝိန်းရူနီ ကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ကန်သွင်းချက်က အင်မတန် လှပခဲ့ပြီး ညာဖက်ဒေါင့်ကွေးအထိ ရောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ဂျိုးဟတ် ပုတ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မတတ်နိုင်ခဲ့ပဲ ဂိုးပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိုး သွင်းယူလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ဝိန်းရူနီဟာ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲများမှာ ၁၁ ဂိုးအထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဘီပွဲစဉ်များမှာ ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူထားနိုင်သူ ဖြစ်လာပါတယ်။
၈၇ မိနစ်မှာလည်း ရူနီ ဧရိယာထောင့်နားကနေ လှမ်ကန်သွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့သေးပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဂိုးပေါက်တည့်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နာကျင်ချိန်ပို အတွင်းမှာ ဇစ်ကို တစ်လုံး ကန်သွင်းခဲ့ပေမယ့် တိုင်ဘေးက ကပ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အတွက် ၄-၁ ဂိုး ရလာဒ်နဲ့ပဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပွဲစဉ်ဟာ ဘောလုံး ပရိသတ် အများစု ထင်မှတ်မထားလောက်တဲ့ ဂိုးရလာဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထနှေးနေတဲ့ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပွဲစတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးကို ဂိုးပြတ် အရှုံးပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပထမပိုင်းမှာ မန်ယူ ကွင်းလယ်ဟာ ဘယ်လိုမှ သုံးစားမရအောင် စုတ်ပြတ်နေခဲ့ပြီး အက်ရ်ှလေယန်းကို ထုတ်ပြီး ကလဲဗားလေး ဝင်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှသာ ကစားကွက် ပြန်လည် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ မန်စီးတီး ရသွားတဲ့ ၂ ဂိုးကတော့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ရုတ်တရက် သွင်းယူနိုင်လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပွဲအဖြေက စောစောစီးစီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲ အနိုင်ရသွားတဲ့ မန်စီးတီး အသင်းဟာ ၅ ပွဲ ကစားအပြီးမှာ ရမှတ် ၁၀ မှတ်နဲ့ ဇယား ဒုတိယနေရာကို တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ ရမှတ် ၇ မှတ်နဲ့ အဆင့် ၈ နေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေပြင်အပူချိန် အေးမြနေဆဲဖြစ်တဲ့ မနက်အစောပိုင်းအချိန်အတွင်းမှာ သင့်ဆိုင်ကယ် ဒါမှမဟုတ် ကားကို ဆီဖြည့်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.... စက်သုံးဆီဆိုင်ကြီးတွေအားလုံးလိုလိုဟာ သူတို့ရဲ့ ဆီသိုလှောင်ကန်တွေကို မြေကြီးထဲမှာ မြှုပ်နှံတည်ဆောက်ထားကြတယ်ဆိုတာကို သင်သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်... မြေပြင်ကအေးလေလေ ဆီရဲ့သိပ်သည်းမှုက ပိုများလေလေပါပဲ... မြေပြင်က ပူလာတဲ့အခါမှတော့ ဆီတွေကပွလာပါတယ်... ဒါကြောင့် နေ့လည်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ညနေပိုင်းမှာ သင်ဆီဝယ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် သင်ဝယ်လိုက်တဲ့ ဆီပမာဏအတိုင်း အတိအကျ အပြည့်အဝမရနိုင်ပါဘူး... ဆီရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ သိပ်သည်းဆ (specific gravity) နဲ့ အပူချိန်တို့ဟာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေပါတယ်... အပူချိန် ၁ ဒီဂရီလောက်မြင့်တက်လာတာဟာ ငွေပမာဏအများအပြားကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ စက်သုံးဆီဆိုင်တွေမှာတော့ မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အတွက် အပူချိန်တိုးမြင့်စေဖို့ လုပ်ဆောင်တာမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး...
စက်သုံးဆီဖြည့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ သင့်ဆီသိုလှောင်ကန်မှာ တစ်ဝက်လျော့သွားတာနဲ့ ပြန်ဖြည့်ဖို့ပါပဲ... အကြောင်းရင်းကတော့ သင့်ဆီသိုလှောင်ကန်ထဲမှာ ဆီများများရှိတဲ့အခါ လေဝင်နိုင်တဲ့ နေရာလွတ်နည်းသွားစေမှာဖြစ်လို့ပါပဲ... လျော့နေတဲ့ဆီလှောင်ကန်ထဲကဆီတွေဟာ သင်ထင်ထားတာထက်ကို ပိုပြီးမြန်မြန်ခန်းခြောက် အငွေ့ပျံနိုင်ပါတယ်...
ဆီဖြည့်တဲ့အခါ ဆီပန့်တွေမှာ လက်ကိုင်ခလုတ်လေးတွေနဲ့ထားပေးတတ်ပါတယ်... ဆီပိုက်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်ပြီး ဖြည့်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ အဲ့ဒီခလုတ်ကို မြန်မြန်မညှစ်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းညှစ်ခြင်းဟာ ရေငွေ့ပါဝင်မှုနှုန်းကိုလျော့ကျစေပြီး သင့်အတွက်ဆီဖြည့်ရတာ တွက်ခြေပိုကိုက်ပါတယ်... ဂရုတစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခလုတ်မှာ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိတာကို သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်... ဆီကို ခပ်မြန်မြန်ဖြည့်ခြင်းဟာ သင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ဆီအရည်ထဲမှာ လေ၊ ရေငွေ့နဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ ပိုပါနေတဲ့ သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်...
☼ သိုလှောင်ကန်ထဲကို ဆီဖြည့်နေချိန်မှာ ဆီမထည့်နဲ့
ဒီအချက်ကလည်း အထူးသတိပြုဆင်ခြင်သင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်... စက်သုံးဆီဆိုင်က ဆီသိုလှောင်ကန်တွေထဲကို ဆီလာဖြည့်နေချိန်မှာ သင့်ကားထဲ ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကယ်ထဲကို ဆီမထည့်သင့်ပါဘူး... အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆီလှောင်ကန်ထဲက အနည်တွေထနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီဆီတွေ သင့်ယာဉ်ထဲရောက်လာရင် အင်ဂျင်ကိုဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်...
ဘီးထဲလေရှိမရှိကို နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက် စစ်ရပါမယ်... လေမရှိတဲ့ တာယာတွေဟာ နောက်ပြန်ဆွဲအား (drag) တွေပိုဖြစ်စေတဲ့အတွက် သင့်ယာဉ်က ဆီပိုစားပါလိမ့်မယ်... ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေမှာ လေပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်... အဲ့ဒီအတိုင်း လေချိန်ထားဖို့လိုပါမယ်...
သင့်ယာဉ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဖယ်ထားဖို့လည်းလိုပါမယ်... သင်တစ်နေရာရာကို သွားတော့မယ်ဆိုရင် မလိုတာတွေကို စစ်ပြီး ဖြုတ်ချန်ထားခဲ့ပါ... ပစ္စည်းအလေးတွေပါလေလေ ဆီပိုစားလေလေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနည်းလမ်းကလည်း ဆီကုန်သက်သာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်...
တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွင် စာခိုးချဖြေဆိုသူများကိုဆရာ၊ ဆရာမများ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အရေးယူရန်လိုအပ်
တက္က သိုလ်စာမေးပွဲများတွင် စာခိုးချ ဖြေဆိုမှုများအား ဆရာ၊ ဆရာမ များအနေဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အရေးယူ ရန်လိုအပ်ကြောင်း အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာ ပြည်)မှညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဉာဏ် ဝင်းအောင်က ပြောကြားသည်။ယခင်က တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားများသည် စာမေးပွဲဖြေဆို ရာတွင် စာခိုးချမှုများပြုလုပ်သည် ကို စာမေးပွဲအခန်းစောင့်ဆရာ များက သိရှိသိမ်းဆည်းအရေးယူ သည်ကိုမကျေနပ်၍ ယင်းဆရာ အားရိုက်နှက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် မှုများရှိခဲ့ဖူးကြောင်း တက္ကသိုလ် ဆရာအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
''အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဒီ လို ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးတွေ မကြား မိတော့ဘူး။ စာမေးပွဲဖြေချိန်တွေ မှာဆိုရင် ပါမောက္ခချုပ်တွေ၊ ပါ မောက္ခတွေကိုယ်တိုင် လှည့်လည် စစ်ဆေးတာမျိုးတွေ လုပ်နေတဲ့ အတွက် ဒါတွေကတော့ ဖြစ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး'' ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်း အောင်က ထပ်မံပြောသည်။
ယခင်က ယင်းကဲ့သို့သော ကျောင်းသားများ၏ခြိမ်းခြောက် မှုများရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် စာခိုးချမှု များကို အရေးမယူကြခြင်းများရှိ ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့သော ခြိမ်း ခြောက်မှုများကိုဂရုမထားဘဲ ရဲဝံ့ စွာအရေးယူနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ထားဝယ်တက္ကသိုလ် စိတ်ပညာ ဌာနမှ ဆရာဦးဇော်သူရက ပြော သည်။
''စာခိုးချတယ်ဆိုတာ မရှိ ဘူးမဟုတ်ဘူး ရှိတယ်။ အခုခေတ် က ငါဘယ်နှပုဒ် ခိုးနိုင်တယ်ဆို တာကို ဂုဏ်ယူပြီးပြောတဲ့ခေတ်။ ကျောင်းသားတွေခိုးတာကိုသိတဲ့ ဆရာကဖမ်းရင် ကျောင်းသားက တော့ မကျေနပ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားက ခြိမ်းခြောက်လို့ မဖမ်းတာတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး'' ဟု ယင်းက ထပ်မံပြောသည်။စာခိုးချသောကျောင်းသား ကို လက်ပူးလက်ကြပ်မိသည်ဆို ပါက ယင်းကျောင်းသားကိုဖြေ ဆိုနေသည့်စာမေးပွဲခန်းအတွင်း မှထွက်ခွာခိုင်းနိုင်ကြောင်း၊ ပညာ သင်နှစ် နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ကျောင်းတက်ခွင့် ပိတ်ထားနိုင် သည်အထိအရေးယူ၍ရကြောင်း သိရသည်။
''မော်လမြိုင်တို့၊ ပုသိမ်တို့ လိုမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင် ဒီခိုးချတာ ကို ဗီနိုင်းတွေထောင်ပြီး အကြီး အကျယ်သတိပေးတာတွေ လုပ် တယ်။ အရင်ကတော့ ထားဝယ် မှာ ကျောင်းသားတစ်ဦး စာခိုးချ တာကိုဖမ်းတဲ့ဆရာတစ်ဦးကို အဲဒီ ကျောင်းသားက ရိုက်မယ် နှက် မယ် ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးလုပ်ဖူး တယ်။ ခြိမ်းခြောက်တိုင်း ကြောက် ပြီး မဖမ်းဘဲနေလို့မရဘူး။ ဒီလို တွေမဖြစ်အောင် အဓိကတာဝန် ရှိတာက သူတို့ကိုသင်တဲ့ဌာနတွေ ဆရာတွေက ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ နားလည်အောင် ပြောပြထားရ မယ့်တာဝန်ရှိပါတယ်''ဟု ဦးဇော် သူရက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိကလေဆိပ် ခြောက်ခုတွင် ယန်း ၁ ဒသမ ၂၃၃ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိ လေဆိပ်ဘေးကင်း လုံခြုံရေး စက်ပစ္စည်းများအား ဂျပန်က ကူညီတပ်ဆင်ပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိက လေဆိပ် ၆ ခုတွင် ဂျပန်ယန်းငွေ ၁ ဒသမ ၂၃၃ ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိ လေဆိပ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စက်ပစ္စည်းများအား ဂျပန်နိုင်ငံမှ တပ်ဆင်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် အပါဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိက လေဆိပ်များဖြစ်သော မန္တလေး၊ ညောင်ဦး၊ ဟဲဟိုး၊ သံတွဲနှင့် ထားဝယ်စသည့် လေဆိပ် ၆ ခုတွင် လေဆိပ်များ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ တပ်ဆင်ပေးမည့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် လေကြောင်း လမ်းညွှန်စက်ပစ္စည်းများ၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်း ထွန်းညှိမီးများ၊ မီးသတ် ကိရိယာများ၊ X-ray စက်များ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ပစ္စည်းများအား စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာများနှင့် လေဆိပ်ဘေးကင်း လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စက်ပစ္စည်းများအား ဂျပန်နိုင်ငံမှ တပ်ဆင်ပေးရခြင်းမှာ မြန်မာအစိုးရနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Japan International Cooperation Agency တို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် အိုဒီအေ ချေးငွေ ကူညီပေးရေး သဘောတူညီမှုအရ ယခုကဲ့သို့ ဂျပန်ယန်းငွေ ၁ ဒသမ ၂၃၃ ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိ စက်ပစ္စည်းများအား မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေဆိပ်များတွင် တပ်ဆင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။